Yeyiphi! IVera Wang ka-Matshi ka-2019 kuMtshakazi ongaguqukiyo
Fokanye i-Spring 2019, i-guru yomtshato Vera wang ayidlali ngemithetho yabani. Ngumbono omangalisayo kukuba umakhi Umtshato wanamhlanje uhlala ejonge ukuvela, ukuvavanya nokuhlola - kodwa uVera Wang uyala ukuphumla kwizindlu zakhe ezifanelekileyo. Ngexesha lokutshata elawulwa ziingubo ezimhlophe, wangena umbala oqaqambileyo, oqaqambileyo wentwasahlobo ka-2019.
Ingqokelela yaphefumlelwa ngemitshini yenkosi yamaDatshi UJohannes Vermeer. Ngeencwadi, iingoma, kunye neefilimu ezinikezelwe kwi-Vermeer's mystique, iyavakala into yokuba uWang aphenjelelwe ngumsebenzi wakhe, naye. Uyewonga ngokusebenzisa kwakhe umbala kunye nokukhanya, ukusuka ekuqhushumeni okufihlakeleyo komntu oziphethe kakubi esukela phantsi koololiwe ukuya kwimikhonto ye-neon grosgrain kunye nempahla ebomvu ecekeceke enezinto ezenziwe ngesandla URebecca uMoses.
UVera unomnqweno wokunciphisa iyantlukwano, izinto ezahlukeneyo kunye nobuntu obutshatileyo kulwimi lwasekhaya kunye nefashoni xa iyonke kwaye uyayenza ngokugqwesileyo ngale ngqokelela. Ingqokelela ehlolisise ububuntshatsheli, intshukumo kunye nombala ngokucacileyo ngumxube wehyper-femorityity (sensity) kunye nobuntununtunu ngepeyinti yombala engazange ithi gabhu. Ukuba ungumakoti waseklasini osafuna emhlophe, uWang ucwangcisa ukuguqula zonke ezi zinto zijongwe zibe zizithunzi zeendlovu, ialabhasta, emhlophe qhwa kunye nebala elimhlophe.
Ukujonga ingqokelela yeVera Wang's Spring 2019…
Ingqokelela yomtshato UJohannes Vermeer Jonga incwadi URebecca uMoses Spring 2019 Vera wang UVera Wang Bridal vera wang entwasahlobo ka-2019 Iingubo ze-vera wang zomtshato
Awuqinisekanga ukuba Ubuhle obungamashumi amabini 'umzimba weLava' Ngaba ukufanele? Bukela iJACKIE AINA's Xelela Zonke iZifundo
UGiigian-Virgil Abloh waseGhana, Abanye babekwa kwiBhodi yeCFDA
UDavido Wenza ukuba kuMtshato weentsuku ezi-3 kaIdris Elba noSabrina Dhowre
Ukuqengqeleka kweYutee Ukuqokelelwa kweLotus kuqokelelwe nguLily Wamanzi